वेब सिरिजतिर सक्रिय फिल्मकर्मी- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
वेब सिरिजतिर सक्रिय फिल्मकर्मी
नेपालमा पछिल्लो समय वेब सिरिज निर्माणकाे संख्या बढेको छ । लकडाउनमा फिल्मका सबै काम ठप्प हुँदा पनि केही फिल्मकर्मीले वेब सिरिजको काम थालेका छन् । महामारीबीच नै केहिले टेलिश्रङ्खला त केहिले वेब सिरिजको घोषणा गरे ।
आश्विन १६, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — अभिनेता विनय श्रेष्ठ बुधबार 'लभसुत्र'को छायांकनका लागि पोखरा हिँडिसकेका छन् । 'लभसुत्र' उनले निर्माण गरेको नयाँ वेब सिरिज हो । सिरिजको ८० प्रतिशत छायांकन सकिसकेको छ । क्लाइमेक्स दृश्य खिच्न उनको टिम पोखरा हिँडेको हो । पाँच दिनमा क्लाइमेक्सको छायांकन सकिन्छ । सिरिजको पोस्ट प्रोडक्सन भने सुरु भइसकेको छ ।
'लभसुत्र' विनयको प्रोडक्सन कम्पनी 'भि मोसन पिक्चर्स' र 'ओएसआर डिजिटल'को सहकार्यमा बन्ने वेब सिरिज हो । विनयले सिरिजको काम थालेको करिब १० महिना भयो ।
कोरोना महामारीबीच वेब सिरिज निर्माणमा लाग्ने विनय एक्ला भने होइनन् । फिल्मका सबै काम ठप्प हुँदा लकडाउनमा केही फिल्मकर्मीले वेब सिरिजको काम थालेका छन् । महामारीबीच नै केहिले टेलिश्रङ्खला त केहिले वेब सिरिजको घोषणा गरे । फिल्म निर्माणमा ठूलो समूह चाहिन्छ । तर, सिरिज सानो समूहमा नै बनाउन सकिने हुँदा फिल्मकर्मीकाे ध्यान त्यता माेडिएकाे हाे ।
नेपालमा पछिल्लो वर्षयता वेब सिरिज निर्माण संख्या ह्वात्तै बढेको छ । त्यसैले त होला लकडाउनमा वेब सिरिजहरु रोकिएनन् ।
लकडाउनबीच पनि 'लभसुत्र'को काम खासै रोकिएन । लकडाउन खुकुलिएसँगै विनयको टिमले सतर्कता अपनाएर छायांकन थालेको हो । 'हामी एउटै होटलमा बस्छौं । सुटिङ अन्तिमतिर पुगिसक्यो । किन रोक्ने भनेर हामी सुटिङमा निस्किएका हौं,'उनले सुनाए । अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मलाई लक्षित गर्दै उनले वेब सिरिज गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा प्रदर्शन गर्ने सोचसहित विनयले सिरिज निर्माण गरिरहेका हुन् । त्यसैले पनि उनको टिम कन्टेन्ट निर्माणमा समय खर्चिरहेको बताउँछन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य छ । अब त्यता प्रस्ताव राख्नलाई पनि प्रमुख कुरा त कन्टेन्ट नै राम्रो हुनुपर्‍यो । हामी कन्टेन्ट बनाउनतिर ध्यान दिइराखेका छौं,' उनले भने ।
टिमले दसैंसम्म टिजर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकाे छ । विनयलाई प्रदर्शन मिति तोकिहाल्ने हतारो पनि छैन। 'हामी पहिला त कन्टेन्ट बनिसकेपछि त्यसले कस्तो प्लेटफर्म माग गर्छ त्यही हेरेर प्रदर्शन गर्ने सोचिरहेका छौं । अहिले नै प्रदर्शन मिति तोक्नु या प्लेटफर्म तोक्नुभन्दा पनि कन्टेन्ट नै राम्रो बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो,' उनले सुनाए, 'हामी कहाँ फिल्मको प्रदर्शन मिति तोकिहाल्न हतार हुन्छ । पछि कन्टेन्टमा केही हुँदैन । त्यस्तो नहोस् भनेर अहिले कन्टेन्टमा धेरै समय दिइरहेका छौं हामी ।'
वेब सिरिजमा युवा दर्शकको क्रेज बढेसँगै फिल्ममेकरको झुकाव यतातिर बढेको देखिन्छ । गत वर्ष अभिनेत्री प्रियांका कार्कीले पनि वेब सिरिज 'जस्ट अनोदर लभस्टोरी' को निर्माण/ निर्देशन गरेकी थिइन् । 'ट्वान्टी फस्ट लभ','हाम्रो हाइस्कूल', 'रङ टाइम', 'डियर लभ'लगायत वेब सिरिजले दर्शकमा आफ्नो पकड बनाएका छन् ।
आफूले बनाएको कन्टेन्ट विश्वसामु पुगोस् भन्ने इच्छा थियो विनयको । त्यसैले त्यो इच्छा पूरा गर्न वेब सिरिज निर्माणमा लागेको उनी बताउँछन् । 'कलाकार/मेकरका हिसाबले हामी जुन कुरा मिहेनत लगाएर बनाउँछौं, त्यो विश्वभर पुगोस् भन्ने हुन्छ नि,' उनले भने, 'जुन बजारका लागि हामी २/४ वर्ष खर्च गरिरहेका हुन्छौं । त्यो अनुसारको दर्शक पाउँदैनौं । त्यसैले यसपटक 'लभ सुत्र'लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार लक्षित गरेर बनाउँदै छौं ।'
१२ वर्ष बलिउडमा काम गरिसकेका कासिम क्यालोले 'लभसुत्र' सिरिज लेखेका हुन् । उनको निर्देशन तथा लेखनमा बनेको 'गन केश'ले पछिल्लो समय चर्चा बटुलेको थियो ।
लगानीका हिसाबले ओटीटी(ओभर दि टप) उपयुक्त देख्छन् विनय । भन्छन्,'नेपालमा करोडौं लगानी गर्दा लगानी उठ्ने टुङ्गो नै हुँदैन । तर ओटीटीमा त्यो डर कम हुन्छ । त्यसैले लगानीका हिसाबले पनि ओटीटी उपयुक्त लाग्यो । सबै उमेर समूहले मन पराउने किसिमको सिरिज हो यो ।'
'लभसुत्र'बाट विश्व बजारमा छाप छोड्न चाहन्छन् विनिय । रोमान्टिक कमेडी विधामा आधारित सिरिजको पहिलो सिजनमा पाँच श्रृङ्खला हुनेछ । सिरिजमा विनयसँगै शिल्पा मास्के, संजोग कोइराला, सुरक्षा पन्त, रविन्द्र झा लगायतको अभिनय रहनेछ ।
त्यस्तै फिल्म लेखक मनोरञ्जन श्रेष्ठ पनि वेब सिरिज ल्याउने तयारीमा छन् । एनबी महर्जन, गोकुल सुवेदीसँग मिलेर उनले 'सतरञ्ज'निर्माण गरेका छन् । लकडाउनअघि नै सिरिजको सम्पूर्ण छायांकन सकिएको हो । सिरिजको सम्पूर्ण छायांकन बुटवलमा भएको हो । अहिले सिरिजको पोस्ट प्रोडक्सनको काम भइरहेको छ ।
थ्रिलर जनरामा बनेको सिरिजमा कलाकारमा सम्पदा बानियाँ, सरु नेपाल, ध्रुव कोइराला, गोकुल सुवेदी, अनिता केसी लगायतको अभिनय रहनेछ । 'मर्डर मिस्ट्रीको कथा छ। नारी संवेदना पनि छ । आफ्नो श्रीमानको हत्यारासँग श्रीमतीले लिने बदलाको कथा समेटेको छ,' श्रेष्ठले सुनाए ।
एक्कसि सिरिज निर्माणतिर ?
'खासमा एनबी, गोकुल र मैले हलका लागि धेरै काम गर्‍यौं, अब सानो पर्दाका लागि गुणस्तरीय विषयवस्तु पस्कौं भनेर छलफल भयो । अनि सिरिज बनाउने निर्णय भयो। बनिरहेका सिरिज हल्काफुल्का मात्रै थियो । तर हामीले फिल्मी लेभलको सिरिज बनाउने सोच्यौं,' उनले भने ।
सुरुमा टेलिभिजनमा सिरिज प्रदर्शनमा ल्याउने उनीहरुको तयारी थियो । अब ओएसआरको डिजिटल प्लेटफर्मबाट सिरिज प्रदर्शन गर्ने तय भएको छ । सिरिज निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च भएको बताउँछन् मनाेरञ्जन । 'फिल्मभन्दा कम छैन हाम्रो सिरिज । १३ एपिसोडका लागि १९ लाख खर्च गरेका छौं । धेरै मिहेनत गरेका छौं,' उनले भने ।
महामारीले गर्दा फिल्मको काम ठप्प हुँदा सिरिज निर्माणतिर लागेर 'राम्रो गरेछु' भन्ने लागेको छ मौनतालाई ।
लकडाउनमा दर्शक 'बोर' नहुन् भनेर विवेक रसाइलीले पनि आफूले लेखन तथा निर्देशन गरेको सिरिज 'डियर लभ' युट्युबमा सार्वजनिक गरे । तर, युट्युबमा सोचेजस्तो भ्यूज प्राप्त नभएको बताउँछन् उनी । खासमा यो सिरिजलाई आइफ्लिक्सले किनेको थियो । आइफ्लिक्समा प्रदर्शनमा आउँदा धेरैले सिरिजलाई मन पराइदिएको विवेक सुनाउँछन् । तर, लकडाउन भएको केही महिनामै आइफ्लिक्स बन्द भयो । त्यसपछि उनले युट्युबमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अहिले उनी 'काठमाडौं लभ स्टोरी' भन्ने सिरिजको तयारीमा जुटेका छन् । सिरिजको छायांकनका लागि सामान्य अवस्थाको पर्खाइमा छन् । २ वर्ष अगाडि उनले 'डियर लभ' निर्देशन गर्दा खासै धेरै सिरिज बन्दैन थियो । तर अहिले त सिरिज निर्माण संख्या बढेको उनी बताउँछन् ।
कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीबाट फिल्म पढेका विवेकलाई बलिउडमा निर्माण भइरहेको सिरिज देखेर यतातिर काम गर्न मन लागेको हो । 'मलाई सिरिज पनि मन पर्ने । राम्रो काम गर्न सकियो भने दर्शक तान्न सकिन्छ भयो, त्यसैले सिरिज निर्माण गर्न थालें,' उनले सुनाए,' नेपालमा पनि एक लेभलको वेब सिरिज बनाउनु पर्छ भन्ने भएको थियो । सिरिज फिल्म जस्तै हो । तर, सिरिजमा धेरै मिहेनत हुन्छ । राम्रो काम गर्‍यो भने दर्शकले मन पराइदिनु हुन्छ ।'
दर्शकमा डिजिटल प्लेटफर्मको पहुँच बढेसँगै धेरैले सिरिज निर्माण गरेको उनी बताउँछन् । उनी आफूले निर्माण गर्ने नयाँ सिरिज अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा प्रदर्शन गर्ने सोचमा छन् ।
नेपाली दर्शक 'कला'मा खर्च गर्ने बानीको कमी भएको बताउँछन् विवेक । त्यसैले यो बानीको निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मतिर सिरिज लैजाउने तयारी रहेको बताउँछन् उनी ।
'नेपाली दर्शकमा पैसा तिरेर हेर्नुपर्छ भन्ने बानी पनि छैन । नेपाली फिल्म हलबाट निस्केपछि युट्युबमा आउँछ भन्ने मानसिकता छ । त्यसैले कति त हलसम्म जानुहुन्न,' उनले भने, 'हामीले सिरिज पनि युट्युबमा राख्यौं भने त्यहाँ निःशुल्क उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ । निशुल्क हेर्ने बानी पर्दै जान्छ । कलालाई पनि किनेर हेर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म ताकेको हो ।'
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७७ १८:४०
आश्विन १३, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — गत भदौ २९ मा नेपालका साउन्ड डिजाइनर (मिक्सर, इडिटर) उत्तम न्यौपानेलाई 'सिनेमा अडियो सोसाइटी'बाट मेल आयो । मेलमा लेखिएको थियो, 'बोर्डले तपाईंलाई सिनेमा अडियो सोसाइटीको सक्रिय सदस्य(एक्टिभ मेम्बर)मा छनाेट गरेको छ । अब तपाईंले आफ्नो नामको पछाडि सिएएस लेख्न सक्नुहुन्छ । बधाई छ ।'
'साउन्ड'मा काम गर्नेहरुको एउटै सपना हुन्छ, आफ्नो नामको पछाडि 'सिएएस' लेख्ने । 'सिएएस' जो कोहीले आफ्नो नामको पछाडि लेख्न पाउँदैन । यसका लागि विश्व प्रख्यात संस्था 'सिनेमा अडियो सोसाइटी'बाट अनुमति पाउनुपर्छ । 'सिनेमा अडियो सोसाइटी'को योग्यता पूरा गर्नेले यो उपाधि/पद आफ्नो नामको पछाडि राख्न पाउँछन् ।
'सिनेमा अडियो सोसाइटी'ले एक्टिभ मेम्बरमा स्वीकृति दिएसँगै ३४ वर्षीय उत्तम निकै उत्साहित छन् । निकै खुसी छन् । 'आफ्नो नाउँको पछाडि सिएएस लेख्न पाउँ भन्ने सबैको सपना हुन्छ । मेरो पनि थियो हो । त्यो सपना पूरा भयो । यो खुसी शब्दमा बयान गर्न सक्दिन,' दंग पर्दै उत्तमले सुनाए ।
फिल्ममा काम गरेको लामो समय उत्तम 'सिएएस'बारे अनविज्ञ थिए । विदेशी फिल्म हेर्दै जाँदा उनको आँखा अडिन्थ्यो अडियो इन्जिनियरको क्रेडिटमा । अडियो इन्जिनियरको नाम पछाडि 'सिएएस' र 'एम्प्स'(एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर्स साइन्स एण्ड आर्ट) लेखिएको भेट्याएपछि उनले यसबारे खोज्न थाले । 'यो के रहेछ? भनेर खोजें । सिनेमा अडियो सोसाइटीबारे थाहा पाएँ । त्यसमा म पनि सहभागी हुन पाएँ भन्ने लाग्थ्यो । तर यत्तिका ठूलो संस्थासम्म पुग्न सकिन्न जस्तो लाग्थ्यो,' पूराना कुरा कोट्याए ।
एकदिन 'बाहुबली'मा साउन्डको काम गर्ने जस्टिन जोसले फेसबुक अकाउन्टमा 'सिएएस' को प्रमाण पत्र सेयर गरे । जस्टिन पनि एक्टिभ मेम्बरमा स्वीकृत भएका रहेछन् । त्यसपछि त उत्तमलाई पनि 'प्रयास गरि हेरौं न' भन्ने लाग्यो । तर, कसरी आवदेन भर्ने प्रकिया केही थाहा थिएन ।
आफूले काम गर्ने विदेशी फिल्मका अडियो इन्जिनियरहरुसँग यसबारे सोधे । उनीहरुले यसका प्रकियाबारे बताइदिए । बिस्तारै उनले 'सिनेमा अडियो सोसाइटी'लाई पछ्याउँदै गए । एकपटक आवेदन पठाएका पनि थिए । तर 'सिएएस'ले आवेदनमा २ जना एक्टिभ मेम्बरको स्पोन्सर चाहिने भन्दै आवेदन लिएन ।
त्यसपछि स्पोन्सर खोज्नतिर लागे उत्तम । फेरि भारतका अर्का साउन्ड इन्जिनियर स्रिजेश नायरले आफू सिएएसको एक्टिभ मेम्बर भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गरेको उत्तमले देखे । स्पोन्सर गर्नेको नामलाई नियालेर हेरे, मार्टी डी हम्फेरेले लेखिएको थियो । उत्तमले हत्त न पत्त उनलाई सम्पर्क गरेर आफू पनि लामो समयदेखि एक्टिभ मेम्बरको लागि तयारी गरिरहेको सुनाए ।
स्पोन्सरलाई मनाउन गाह्रो थियो । मार्टी डीले २ महिनापछि सकारात्मक हुँदै उत्तमलाई आफ्नो परिचय अनि कामबारे जानकारी मागे । आफूले गरेको फिल्महरुको ट्रेलर रिलिज हुनासाथ उत्तम मार्टी डीलाई पठाउँथे । त्यसपछि अन्तत: लामो समयपछि मार्टी डी स्पोन्सरका लागि तयार भए । मार्टी डीले नै अर्को स्पोन्सर खोजिदिए, जोर्ज । स्पोन्सर खोज्न सजिलो थिएन । 'मार्टी डीले पनि कहाँ एकैपटक हुन्छ र भन्नु भएको थियो । कति समय पर्खाउनु भयो । धेरै कामहरु हेर्दै जानु भएपछि तयार हुनु भएको हो । स्पोन्सर सजिलै भेटेको भए पहिला नै अवार्ड पाइसक्थें । गाह्रो थियो तर म भाग्यमानी ठान्छु मैले २ पटक एमी अवार्ड र ओस्कार जितिसकेका स्पोन्सर भेटें,' उनी सुनाउँछन् ।
स्पोन्सर भेट्याएपछि उत्तमले दोस्रो पटक 'सिएएस'को एक्टिभ मेम्बरको लागि आवेदन भरे । आवेदनमा पाँच वर्षको कामको अनुभव पठाउनु पर्थ्‍यो । अवार्डहरु उल्लेख गर्नुपर्थ्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मबारे जानकारी दिनुपर्थ्‍यो । ६ महिनाअघि उनले सबै कुरा पूरा गरेर आवेदन पठाएका थिए ।
बोर्डको दुई तिहाई सदस्यले एक्टिभ मेम्बर‍ छनौट गर्ने गर्छ । दुई तिहाइले उत्तमलाई योग्य ठान्यो । 'ठूला साउन्ड डिजाइनरहरुसँग म उभिन पाएको छु । भारतमा जम्मा तीनजना अनुप देव, स्रिजेश नायर, जस्टिन जोसले यो अवार्ड पाएका छन्,' खुसी हुँदै उत्तमले भने, 'यो मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।'
एक्टिभ मेम्बरमा छनाेट भएको दिन त उनलाई विश्वास नै लागेको थिएन । स्पोन्सर गर्ने दुवैले उनलाई सामाजिक सञ्जालतिर बधाई दिए । तर पनि विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन् उनी । '२/३ दिन सम्म त विश्वास नै लागेन । हामी कति सानो ठाउँमा काम गरिरहेका हुन्छौं । तर सिनेमा अडियो सोसाइटीले त्यसरी सदस्यमा स्वीकृत गर्नु ठूलो कुरा हो । स्पोन्सरले बधाई दिँदा पनि मैले बारम्बार उनीहरुलाई सोधिरहेँ, साँच्चै हो भन्दै,' उत्तमले भने ।
कोरोना महामारीका कारण उनको प्रमाण पत्र, गोल्ड मेडल, ब्याच, एक्टिभ मेम्बरको नम्बर कुरियर हुन सकिरहेको छैन । उनी व्यग्र प्रतीक्षामा छन् आफ्नो प्रमाण पत्र हेर्न । त्योसँगै अझ प्रतीक्षा छ, नाम पछाडि सिएएस राखेको हेर्ने ।
त्यसैले प्रदर्शनको तयारीमा रहेका फिल्महरुको क्रेडिट पछाडि उनले सिएएस राख्न थालिसकेका छन् । हालै उनले 'कठपुतली' फिल्मको काम सके, त्यसमा पनि आफ्नो नामको पछाडि उनले सिएएस राख्न लगाए । त्यस्तै 'चिसो एस्ट्रे'को क्रेडिटमा पनि सिएएस जोडिसकेका छन् ।
सिनेमा अडियो सोसाइटीका मानिसहरु नै ओस्कारमा भोट गरिरहेका हुन्छन् । सिनेमा अडियो सोसाइटीका सक्रिय सदस्यलाई 'एम्प्स'(एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर्स साइन्स एण्ड आर्ट)ले पनि सजिलै स्वीकार्ने गर्छ । उत्तम यसले ठूला संस्थाहरुका लागि बाटो खोलिदिएको बताउँछन् । 'एकेडेमीमा जाने बाटो खुलियो । सिनेमा अडियो सोसाइटीमा पुग्नु नै ठूलो कुरा हो । अब मैले एम्प्समा पनि सहभागिता जनाउन पाउँछु । मेरो लागि बाटो खुलेको छ,' उनी सुनाउँछन्, 'अब हलिउडका ठूला कार्यक्रममा म नेपाली फिल्मको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछु । हलिउडका फिल्महरुसँग प्रतिस्पर्धाका लागि मैले सिधैं फिल्महरु पठाउन पाउँछु ।'
'सिएएस'को अवार्ड पाउनेहरु ओस्कार जित्ने फिल्महरु हुन्छन् । ५६ औं सीएएस अवार्ड 'फोर्ड भर्सेस फरारी', 'जोकर', 'ओन्स अपन अ टाइम इन हलिउड', 'आइरिस म्यान'ले जितेको थियो । स्टेभेन स्पिलबर्गलाई सम्मान गरिसकेको सिनेमा अडियो सिसाइटीको बोर्डमा नाम चलेका फिल्मकर्मीहरु छन् । यस्तो संस्थाको सक्रिय सदस्यमा स्विकृत हुनु उत्तम मात्र होइन नेपाली फिल्म उद्योगका लागि पनि उपलब्धि हो ।
रौतहटमा जन्मेका उत्तम सन् २००५ मा काठमाडौं आए । उत्तम पहिल्यैदेखि इलेक्ट्रोनिक्समा रुची राख्थे । त्यसैले समय पाउनासाथ टंक न्यौपानेकाे काम गर्ने स्टूडियोमा पुग्थे । बिस्तारै साउन्डतिर उनको रुचि बढ्दै गयो । त्यसपछि उनले प्रदीप उपाध्यायसँग नक्सालमा साउन्ड पढे । ३ महिने कोर्स सके लगतै गीत रेकर्डिङमा काम सुरु गरे । त्यसपछि डेढ वर्षसम्म इमनविक्रम शाहको स्टूडियोमा गीत रेकर्डिङको काम गर्न थाले । त्यसपछि नीर शाहको नेश्नल स्टूडियोमा काम थाले । त्यहाँ उनको भेट दीप तुलाधारसँग भयो । उनले दीपबाट संगीतका विषयमा धेरै कुरा सिके ।
बिस्तारै उनलाई फिल्मतिर झुकाव बढ्न थाल्यो । विनोद पौडेलको लघु फिल्म 'अवेकन आइज'मा साउन्डको काम गर्दै उनले फिल्मतिर पाइला चाले । 'मिसिन पैसा' र 'मेरो एउटा साथी छ' हुँदै बिस्तारै उनी फिल्मको काममा व्यस्त भए । फिल्महरुमा काम गर्न थालेपछि उनलाई साउन्डबारे अझै सिक्ने रहर जाग्यो । 'मेरो एउटा साथी छ' सक्नासाथ चेन्नईको 'नेश्नल इन्स्टिच्यूट अफ अडियो आर्ट'मा ८ महिना साउन्डको कक्षा लिए ।
८० बढी नेपाली फिल्ममा साउन्डको काम गरिसकेका उत्तमले विदेशी फिल्ममा पनि कामको अनुभव बटुलेका छन् ।
उनले फिफा वर्ल्ड कपमा आधारित 'डर्टी गेम'मा साउन्ड मिक्सरको काम गरेका थिए । त्यस्तै बुसान इन्टरनेश्नल फिल्म फेस्टिभलले प्रस्तुत गरेको फिल्म 'चन्द्र'मा पनि काम गरेका छन् । फिल्मलाई नेपाली र इरानी निर्देशकले निर्देशन गरेका थिए । त्यस्तै 'डन्ट स्टप रनिङ'मा पनि उनले सोलो मिक्सिङ गरेका छन् । ओस्कार मनोनयमा परेको एरिक भ्यालीको 'बियोन्द द क्लाउड्स'को नेपालको थियट्रिकल मिक्स उनैले गरेका हुन् । डकुमेन्ट्रीहरुमा पनि उनले साउन्डको काम गरिसकेका छन् ।
नेपाली फिल्ममा साउन्डको पक्ष निकै कमजोर हुन्छ । साउन्डको लागि उचित समय नपाउँदा यस्तो समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । 'पहिलाको फिल्मको तुलनामा अहिले नेपाली फिल्मको साउन्ड राम्रो भएको छ । तर साउन्ड मात्र राम्रो भएर भएन । फिल्म पनि राम्रो बन्नु पर्‍यो । अर्को त साउन्ड कमजोर हुनुको अर्को कारण समय हो । पोस्ट प्रोडक्सनमा साउन्डका लागि उपयुक्त नै समय हुँदैन ।'
अन्तिम अवस्थामा फिल्ममा साउन्डको काम सुरु हुने उनको अनुभव छ । साउन्डलाई महत्त्व दिने निर्देशक कम भएर पनि यो समस्या नेपाली फिल्म उद्योगमा देखिएको उनी बताउँछन् । 'प्रदर्शनको २/३ दिन अगाडि मात्र फिल्मको मिक्सिङ सुरु हुन्छ । साउन्डलाई महत्त्व नै दिँइदैन । यहाँ त आवाज सुने पुग्छ भन्ने धारणा छ,' उनले भने, 'साउन्डलाई महत्त्व दिने निर्देशक औंलामा गन्न सकिन्छ । यता फिल्म मिक्स सकिएको हुँदैन । विदेशमा फिल्म पठाउनु पर्‍यो भनिदिन्छन् । हतारमा फिल्मको काम सुरु गर्दा साउन्ड कमजोर हुन्छ ।'
उनले 'बुलबुल' र 'ददिया'मा उपयुक्त समय पाएका थिए । त्यसैले ती फिल्ममा चित्त बुझ्दो नतिजा निस्किएको उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ११:५३
अब पालो 'जेन्डर न्युट्रल' अवार्डको
गायक/गायिकाको दसैँ : न स्टेज कार्यक्रम, न हर्षोल्लास
अब चीन विश्वकै ठूलो 'बक्सअफिस'
कंगना र बहिनी रंगोलीविरुद्ध 'एफआईआर' दर्ता
खोजिँदैन अब दसैंमा सारंगी धुन
दुर्गालाल केसी, मधु शाही